स्किम होइन ब्राण्ड हेरेर मोटरसाइकल... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
स्किम होइन ब्राण्ड हेरेर मोटरसाइकल किनौं–पुनम सिंह (एचएच बजाज )
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडाैं असार १४
करिव ३ महिना भन्दा लामो लकडाउनले देशका अधिकांश व्यवसाय ठप्प भए। यसको असर अटोमोवाइल क्षेत्रले पनि बेहोर्नु पर्‍यो। लकडाउन केही खुकुलो भएलगत्तै दुई पांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधन आयातकर्ता कम्पनीले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न आकर्षक योजनाहरु ल्याएका छन्।
नेपालमा अत्याधिक रुचाइएको ब्राण्ड बजाजको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता एचएच बजाजले पनि ग्राहकहरुका लागि आकर्षक अफर लिएको छ। नयाँ अफर लगायतका विषयमा हामीले एचएच बजाजकी असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर पुनम सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं
-लकडाउनले दुई पाङग्रे सवारी साधनको क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
लकडाउनमा त हामी पुरै शून्यमै थियाैँ। अझै एक डेढ महिना त हेर्नैपर्छ। लकडाउन केही खुकुलो भएयता पनि सार्वजनिक यातायात चलेको छैन। मान्छेहरुलाई यति खेर निजी सवारी साधनको आवश्यकता खड्किएको छ। त्यसकारण अटोमोवाइल्स क्षेत्र रिकभर नै गर्न नसक्ने अवस्था नहोला।
-महिना कारोबार पुरै ठप्प भयो। व्यवसाय रिकभर गर्न तपाईँहरुको प्रयास कस्तो छ ?
यसको लागि धेरै तत्व हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवधिमा पनि कम्पनीको खर्च रोकिएको थिएन। यो ३ महिनाको कभर गर्न त कम्पनीलाई कम्तीमा पनि ६ महिना त लाग्छ लाग्छ। जवसम्म मार्केट ग्रो भएर पहिलेको स्थितिमा पुग्दैन त्यो बेलासम्म रिकभरीको हुने कुनै छाँटकाट छैन।
अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक सोच लिएर नयाँ तरिकाले काम गरिरहेका छाैँ। स्किम ल्याएको पनि हामीले त्यही सोचमा हो।
यदि कसैसगँ पैसा कम छ र मोटराइकल किन्न जरुरी छ भने थोरै डाउन पेमेन्टको अफर दियाैँ भने त उहाँलाई सजिलो भयो हुन्छ भनेर हामीले अफरहरु सार्वजनिक गरेका छौं।
-यो पटक कस्ता कस्ता स्किम ल्याउनु भएको छ त ?
हामीले ४ वटा अप्सनको स्किम निकालेका छौँ। पहिलो स्किम अन्तर्गत कसैले म पुरै पैसा तिरेर बाइक किन्छु भन्नु भयो भने १२ हजार छुट हुन्छ। पैसा थोरै हुने को लागि हामीले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै मोटरसाइकल उपलब्ध गराउछाैँ।
जसमा १६ प्रतिशत व्याजदर हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो अप्सन अन्तर्गत कसैले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी शून्य प्रतिशत व्याजदरमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन सक्छौ। त्यस्तै अहिलेको माहामारीको अवस्थामा मेडिकल फिल्डमा काम गर्नेहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरेका छाैँ।
त्यसैगरी अहिलेको अवस्थामा कसैलाई शोरुम जान मन नलाग्ला । त्यसको लागि हामीले बुकिङ अनलाईन पोर्टलनै खोलेका छौ। त्यसपछि उहाँको एरियाको डिलरले ग्राहकलाई सम्पर्क गरेर, टेष्ट राइड गर्नु छ भनेपनि एकजना स्टाफ गएर टेष्ट राइड गराउनु हुन्छ । त्यस्तै क्यासमै काम गर्नुहुन्छ भनेपनि हामी डेलिभरी नै गराउन सक्छौ।
-स्किम बजाजका सबै मोटरसाइकललाई एउटै हो ?
सबैलाई एउटै हो। यसमा द्धिविधामा नपर्न म ग्राहकहरुसँग आग्रह गर्दछु।
-अहिले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, ग्राहकहरुसँग पैसा छैन। सेल्स बढाउन अफर मात्र हो कि अरुपनि केही रणनिती अपनाउनु भएको छ ?
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पनि हात बाँधिएको छ। किनभने प्रमोशन गरौँ भने अनलाइन बाहेक अरु कुनै क्षेत्र नै छैन। अहिले पनि मान्छे पत्रिका छुन डराउँछन। यस्ता कारणले प्रमोशन पनि निकै सोचेर गर्नु परिरहेको छ।
त्यस्तै अर्को कुरा कति गर्ने र कति नगर्ने भन्ने हाम्रो स्थिति पनि निश्चित छैन। अहिले लकडाउन खुकुलो छ भोली संक्रमण बढ्यो भने के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। त्यसकारण दिर्घकालीन रणनिती सोच्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौ।
-लकडाउन खुकुलो भएपछि तपाईँहरुको सेल्स र बुकिङको अवस्था कस्तो छ ?
लकडाउन खुकुलो भएपछि स्थितिमा केही सुधार आएको छ। तर यो सिजनमा जति हुनुपथ्र्यो त्यत्ति त पुग्दै पुग्दैन। तर अहिलेको स्थित हेर्दा यत्तिको सेल्स र बुकिङलाई हामी नराम्रो भन्दैनौ।
-अहिले स्किमको बाढी नै आएको छ। ग्राहकले मोटरसाइकल कसरी छान्ने होला ?
मेरो विचारमा मोटरसाइकल सेग्मेन्टमा स्किम भन्दा ठूलो ब्राण्ड भ्यालु हो। दशैमा, नयाँ वर्षमा स्किम आउने भनेको एउटा स्ट्याण्डर्ड नै हो। बजाजले पनि त्यही समयमा निकाल्थ्यो।
अहिले स्पेसल कन्डिसनमा बीचमा निकाल्यौ तर हाम्रो प्रतिश्पर्धीहरुको वर्ष भरी नै स्किमहरु आइरहेकै छ। स्किम थप सुविधा हो र मोरसाइकल स्किम हेरेरै किन्ने चाहीँ होइन। कसैको दिमागमा म यही ब्राण्डको किन्छु भन्ने सोच छ भने स्किम मात्र हेरेर ब्राण्ड परिवर्तन गरिदैन।
-बजाजकै मोटरसाइकल किन किन्ने त ?
मैले देखेको अनुसार गाडी होस या मोटरसाइकल ग्राहकले बजारमा जे धेरै देख्नुहुन्छ त्यही किन्नु हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट ग्राहकलाई दिनुपर्ने सुविधा दिन्छौ। उहाँहरुलाई चाहिएको जस्तो ब्राण्ड,स्किम दिएका छौ। मोटरसाइकल बेचेर मात्र हुदैँन।
सर्भिसको लागि नेटवर्क हाम्रो सबैभन्दा राम्रो छ। त्यस्तै बजानको स्पेयर पार्टस् सजिलै पाइन्छ । नेपाल भर एउटै मूल्यमा पाइन्छ। बजाजको मोटरसाइकल किनेर ग्राहक पछुताउनु पर्दैन।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार १४, २०७७, १०:५०:००